शनिबार पनि आरटीजीएस प्रणाली सुचारु रहने
काठमाण्डौ । आरटीजीएस प्रणाली भोलि शनिबार पनि सुचारु रहने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै भोलि शनिबार पनि आरटीजीएस प्रणाली सुचारु रहने जानकारी गराएको हो। आरटीजीएस प्रणाली विकास ऋणपत्र २०८८ र २०७९ ‘ङ’ को ब्याज भुक्तानी लागि सुचारु रहने सूचनामा उल्लेख छ। यो प्रणाली बिहान १० बजेदेखि मध्याह्न १२ बजेसम्म सुचारु...
रु. १९.१० अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै राष्ट्र बैंक, सोमबार बोलकबोल
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाख १९ गते (सोमबार) १९ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले वैशाख २० गते जारी गर्न लागेको २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल आउँदो सोमबार गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले २८ दिनका लागि २ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ। यो ट्रेजरी बिल...
गभर्नर अधिकारीको मुद्दामा सुनुवाइ सुरु, आज होला छिनोफानो ?
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा शुक्रबार सुनुवाइ सुरु भएको छ। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले गभर्नर अधिकारीको मुद्दामाथि सुनुवाइ गरेको हो। यो मुद्दामा बिहीबार पनि सुनुवाइ भएको थियो। तरसमय अभावले गर्दा गभर्नर अधिकारीको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा...
गभर्नर अधिकारीको मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा, अब भोलि सुनुवाइ हुने
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दा आज बिहीबार हेर्दाहेर्दै राखिएको छ। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले आज समय अभावले गर्दा गभर्नर अधिकारीको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो। अब यो मुद्दाको सुनुवाइ (पेसी) भोलि शुक्रबारलाई तोकिएको छ। गभर्नर अधिकारीको मुद्दाको मंगलबारदेखि...
गभर्नर अधिकारीको मुद्दामा आज सुनुवाइ
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दा आज बिहीबार सुनुवाइ हुने भएको छ। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा गत मंगलबार गभर्नर अधिकारीको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको थियो। मंगलबार समय अभावले यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। बुधबार गभर्नर अधिकारीका तर्फबाट वकिलले बहस गरेका...
गभर्नर अधिकारीको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, अब बिहीबार सुनुवाइ हुने
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दा आज हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा आज गभर्नर अधिकारीको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको थियो। तर, आज समय अभावका कारण सुनुवाइ नसकिएपछि यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। अब यो मुद्दाको अर्को पेसी आउँदो बिहीबारका...
बैंकिङ प्रणालीबाट एकैदिन रु. १६ अर्ब निक्षेप बाहिरियो, कर्जा लगानी रु. २ अर्बले बढ्यो
काठमाण्डौ । बैंकिङ प्रणालीबाट एकैदिन १६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हिजो वैशाख १२ गते एकैदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको हो। योसँगै कुल निक्षेप ४९ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। गत वैशाख ११ गतेसम्म कुल निक्षेप ४९ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। हिजो एकैदिन वाणिज्य...
बैंकहरुमा रु. ३ अर्ब बढी लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा २ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंकको विभिन्न कोषमा कोषमा रहेको २ अर्ब ५ लाख रुपैयाँ मुद्दति निक्षेपका रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको हो। जसअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुमा १ अर्ब ६० करोड ५ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रियस्तरका...
रु. १८.६० अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै राष्ट्र बैंक, भोलि बोलकबोल
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि वैशाख १२ गते १८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले वैशाख १३ गते जारी गर्न लागेको २८ दिने र ९१ दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल भोलि सोमबार गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले २८ दिनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ। यो ट्रेजरी बिल आउँदो जेठ १० गते परिपक्व...
एलसीमा कडाइ गर्दा बजारमा कस्मेटिक सामग्रीहरुको हाहाकार, दोब्बरले बढ्यो भाउ
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दो आयातले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितीमा लगातार घट्दो क्रममा हुनुका साथै अर्थतन्त्र संकटमा परेको भन्दै २७ वटा वाणिज्य बैंकका सीईओहरुलाई बैंकहरुले अत्यावश्यकबाहेकका सम्पूर्ण आयातित वस्तुका लागि एलसी नखोल्न कडाइ निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनसँगै बैंकहरुले अहिले एलसी बन्द गरेका...
काममा फर्किए गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बुधबारबाट काममा फर्किएका छन्। गत चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद्ले सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरी छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। तर, अधिकारीले गैरकानुनी ढंगले पूर्वाग्राही रुपमा सरकारले आफूलाई निलम्बन गरेको भन्दै...
गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। अधिकारीले दिएको रिटको आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै उनी भोलिबाट काममा फर्किन पाउने भएका छन्। न्यायाधीश...
निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पक्षमा क–कसले गर्दैछन् बहस ?
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमाथि आजबाट सुनुवाइ सुरु हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा आज पहिलो सुनुवाइ हुनेछ। सरकारले कानुनविपरीत आफूलाई निलम्बन गरेको भन्दै अधिकारीले गत आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका...
निलम्बित गभर्नरको रिटमा आज पहिलो सुनुवाइ
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिटमा आज मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पहिलो सुनुवाइ हुने भएको छ। अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति समेतलाई विपक्षी बनाई आइतबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।...
निलम्बित गभर्नरको रिटमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिटमा भोलि (मंगलबार) सर्वोच्च अदालतमा पहिलो सुनुवाइ (पेसी) हुने भएको छ। अधिकारीले आइतबार सर्वोच्चमा सरकारविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए। रिटमा अधिकारीले आफूमाथि गरिएको कारबाही बदर गरी गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किने अन्तिम आदेश माग गरेका छन्। अधिकारीले सरकारले...